Ministeerri Barnootaa barsiisoota sadarkaa 1ffaafi 2ffaa duraanifi leenjii kennuuf qophii irra akka jiru beeksise - ETHIOPIANS TODAY
Ministeerri Barnootaa barsiisoota sadarkaa 1ffaafi 2ffaa duraanifi leenjii kennuuf qophii irra akka jiru beeksise
Feb 3, 2021 MoEEthiopia
Ministeerrichi waltajjiin marii hooggantootaa Biiroo Barnootaa Naannoolee,barsiisoota ,diinii koollejjiifi ogeessota ministeerricha hirmaachsee taasiseera.
Waltajjiicha irratti leenjichi kennamuu kallatti barnootaa haaraafi leenjii irratti akka xiyyeeffatuu himameera.
Deetaan Ministira Ministeera Barnootaa Dr. Garramaw Hulluqaa, leenjichi kan barbaachiseef qulqullina barnootaa mirkaneessuuf barsiisonni sadarkaa 1ffaafi 2ffaa kallatti barnootaa haaraafi leenjii irratti yoo fudhatan ta’uu himan.
Kolleejjiin barsiisootaa naannooleetti argamanis kallattii barnootaa haaraafi leenjii bu’uuraa taasisuu akka qabanis himan.
Waltajjii irrattis hooggantootni Biiroolee Barnootaa Naannoolee, barsiisoota diinii kolleejjii 39 fi ogeessotni ministeerricha irratti hirmaataniru.Ministeericha odeeffanne.
Jijjiirraan barattootaa yeroof dhorkame